Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chikumi 12, 2020
Chikumi 12, 2020
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevaviri vaine vchirwere ichi nezuro.
Madzimai matatu eMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, anoti Muzvare Joanna Mamombe, Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova, vari mudare redzimhosva vachipomerwa dzimwe mhosva dzinosanganisira kunyepa zvichitevera kupambwa kwavakaitwa pamwe nekutochwa vari mumaoko emapurisa.
MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe yonetsana mudare neMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa pagakava remuzinda webato iri, weMorgan Richard Tsvangirai House, uyo waizivikanwa nezita rekuti Harvest House.
Studio7 inorambidzwa kutora nhau apo mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanga vachiparura hurongwa hwemabhazi eZupco anoenda kumaruwa.
Aimbotambira Black Mambas neSporting Lions, Philemon Mutyakureva, anoti Zimbabwe haisisina vatambi vanonyatsokugona mutambo uyu kuitira kuti vakwezve vatsigiri venhabvu vakawanda kudzinhandare sezvaisiitika mumakore aaitamba nhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyika panguva ino.